KASHIFAAD: Khilaafka 2 gabdhood oo bur-bur ku wada dowladda Xasan Sh. - Caasimada Online
Home Warar KASHIFAAD: Khilaafka 2 gabdhood oo bur-bur ku wada dowladda Xasan Sh.
Inta aanan u galin Burburka Dowladda Xasan Sheikh iyo meesha hada xaalku marayo, waxan rabaa inaan gadaal u laabto oo idin xasuusiyo Qoraaladeenii hore ee aan ku sheegnay Khilaafkii Madaxweyne Xasan Shiikh iyo Saacid.
Marwo Caasho Xaaji ayaa dhabarka u ridatay mas’uuliyadaas, waxayna casumaad u sameysay dhamaan Xildhibaanadii beelaha Isaaq, halkaasoo ay ugu qeybisay qofkiiba $3.000 (Saddex Kun oo Dollar), sida ay xaqiijiyeen Xildhibaanno, wuxu Ra’isal Wasaare C/wali Sh. Axmed ugu badalay booskii Fowsiyo Nin lagu magacaabo Yusuf Ibraahim Kaahin.
Laakin gaashaan-buurta kasoo horjeeda Madaxweyne Xasan Shiikh iyo saaxibadiis ee ay hogaaminayaan Ra’isal Wasaare C/wali, Saacid iyo Caasho Xaaji waxay soo dhaqaajiyeen Moshin cusub oo ay baarlamaanka ku horkeenayaan qorshe lagu diidayo in Wasiirada cusub lagu soo daro Wasiiradii hore ee dowladii Ra’isal Wasaare Saacid, inkasta oo uu fashilmay.
Qorshahaan oo aan la ogeyn sida uu u hirgali karo ama sharciyad uu u leeyahay ayaa wuxuu cadeyn u yahay burbur iyo kala tag ay wajiga saartay dowladii loo han-weynaa, waxaana muuqata in Madaxweyne Xasan Shiikh uu durbadiiba ka shalaayay magacaabista Ra’isal Wasaare C/wali Sh. Axmed.